Mobile Kubhadhara Hacks eBhizinesi | Martech Zone
Chipiri, May 13, 2014 Monday, May 12, 2014 Douglas Karr
Ko bhizinesi rako rinopa sarudzo yekubhadhara nhare? Sezvo masevhisi ekubhadhara uye matekinoroji efoni achiva anowanikwa kwese, mukana wekushandura tarisiro kuva mutengi kuburikidza neye mobile mubhadharo sarudzo inofanirwa kuve pane yako radar!
Kubhadhara nharembozha zviri pachena tekinoroji inoteedzera yemabhizinesi eese saizi. Muna 2012 maive ne $ 12.8 bhiriyoni mukutengesa nhare muUS, na2017 iyo nhamba ichave iri pamadhora mazana mapfumbamwe emadhora. Icho chikamu che90% chakakora chegore rekukura mwero pamusoro pemakore mashanu! Asi 48% chete emabhizimusi madiki anoshandisa chero mhando yehunyanzvi hwefoni, ndoda tekinoroji yekubhadhara nhare. Yakaunganidzwa
Ini ndinozviwana ndave kubhadhara yangu mbozhanhare bhiri, inishuwarenzi, kukwira kutasva uye kunyange kubhadhara yangu yekupaka mumugwagwa kuburikidza nefoni kunyorera uye nhare dzekubhadhara muripo. NeMugovera ndakaenda kune fundraiser uko okisheni yakanyarara yakaitika zvachose nekushandisa mameseji uye hapana chimwe chinhu!
Pachine chiitiko mukutengeserana kwese - pakati pesarudzo yekutenga nekutenga chaiko - uko tarisiro zhinji dzinosiya. Nhare mbozha inogona kunge iri bhiriji rekuzvibvisa pane izvo kurasikirwa.
Tags: Dwollalevelupmobile kubhadhara kubvumanhare yekubhadhara nharemobile kubhadharakuunganidzwapadyo nemunda kutaurirananfcphonewipeQR Makodhisquareber
Google Analytics: Zvemukati Mapoka eChinyorwa Chekuita Kuongorora